တစ်ခါတုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာ ရောင်စုံဘောလုံးလေးတွေရောင်းရင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတယ် ။ သူ့မှာ ဘောလုံးအနီရောင် အ၀ါရောင် အစိမ်းရောင်အပြာရောင် အဖြူရောင် စတဲ့ ရောင်စုံရှိတယ် ။
သူဟာ ဘောလုံးလေးတွေအ၀ယ်ပါးတဲ့နေ့ဆိုတရင်သူ့လက်ထဲက ဘောလုံးတစ်လုံးကို လေထဲကို လွှတ်တင်လိုက်တယ် ။အဲဒီအခါ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကကလေးတွေက သဘောကျပြီး သူ့ဆီမှာ ဘောလုံးတွေလာဝယ်ကြတဲ့အခါ ရောင်းအားလည်းပြန်တက်လာခဲ့တယ် ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူဟာရောင်းအားကျတဲ့နေ့တွေဆိုရင် သူ့လက်ထဲက ဘောလုံးတွေထဲက တစ်လုံးကို လေထဲ လွှတ်တင်ပြီးကလေးတွေကို ဆွဲဆောင်လေ့ရှိတယ် ။တစ်နေ့ တော့ သူဘောလုံးရောင်းနေရင်း ကလေးတစ်ယောက်က သူ့ကို အနောက်ကနေ လှမ်းဆွဲလိုက်တာသတိထားမိလိုက်တယ် ။
သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးငယ်က သူ့ကိုမေးတယ် ။
“ ဦးဦး.... ဦးဦး လက်ထဲက ဘောလုံး အနက်ရောင်လေးကရော တခြား ရောင်စုံဘောလုံးတွေလို လေပေါ်တက်နိုင်လားဟင် ”
ဘောလုံးရောင်းတဲ့သူက ညှင်သာစွာ ပြုံးပြလိုက်ပြီး ကလေးကိုပြောတယ် ။
“ သားရေ . . လေပေါ်ကို ပျံတက်နိုင်တာဟာ ဘောလုံးတွေရဲ့အရောင်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး ..ဘောလုံးထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ဟီလီယံ ဓါတ်ငွေ့တွေကြောင့်ပါ ဒါကြောင့် အနက်ဖြစ်စေ အနီဖြစ်စေ အပြာဖြစ်စေ အထဲမှာ လေပေါ်ပျံတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေထည့်ထားရင် ပျံတက်နိုင်ပါတယ် ”
အပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ လူတွေကို အကဲဖြတ်လို့မရသလို အစွမ်းအစကိုလည်းဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူး ။ အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ အမြင့်ပေါ်ပျံတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းဟာ ပုံသဏ္ဍန်ပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘူး ။ အတွင်းက ပျံတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိ အရည်အချင်းတွေ ကြောင့်သာဖြစ်တယ် ။
သင်ရော . . . အပြင်ပန်းလှအောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူတစ်ယောက်လား ...အတွင်းက စိတ်နှလုံးသား မြင့်မြတ်အောင် အစွမ်းသတ္တိရှိအောင် ကြိုးစားနေတဲ့သူတစ်ယောက်လား ?
The Man Who Sells Balloons အားခံစားဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 5:22 PM
အန်တီလေးမေခင် September 27, 2012 at 8:17 PM
အပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ လူတွေကို အကဲဖြတ်လို့မရသလို အစွမ်းအစကိုလည်းဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူး ။ အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ အမြင့်ပေါ်ပျံတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းဟာ ပုံသဏ္ဍန်ပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘူး ။ အတွင်းက ပျံတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိ အရည်အချင်းတွေ ကြောင့်သာဖြစ်တယ်
မြတ်နိုးသူ(MUFL) September 27, 2012 at 8:20 PM
အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ အမြင့်ပေါ်ပျံတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းဟာ ပုံသဏ္ဍန်ပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘူး ။ အတွင်းက ပျံတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိ အရည်အချင်းတွေ ကြောင့်သာဖြစ်တယ်
နေ၀န်းနီနီ September 28, 2012 at 1:53 PM
let me share bro.
နေ၀န်းနီနီ September 28, 2012 at 1:54 PM
မေမေ . . . သားစာလေးဖတ်ပေးပါ
Attitude and Performance
ရပ် . . စေချင်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးစစ်ပွဲ တွေ
ဘီလုံးငှက်နှင့်လယ်သမား တစ်ခါတုန်းက ဘီလုံးငှက်တ...
Faith ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုက အရာအားလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်...
ကိုယ်တစ်ခြမ်းသေဘ၀မှ ကမ္ဘာ့အပြေးအမြန်ဆုံးဖြစ်လာသူ Wi...
သက်တန့်ချို စာတွေကို Android OS မှာ တိုက်ရိုက်ဖတ်ဖ...
“ လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော သော့လေးများ ” စာအုပ်ထွက်ပြီ...
“ ကျေးဇူးပြုပြီး ငါတို့ကိုနမ်းရမှာ မရှက်ပါနဲ့”
လမ်းခွဲလိုက်လို့ အသဲကွဲသွားတာ ရှက်စရာလား ?
ဂျီမေးလ်ကို2step verification method နဲ့ကာကွယ်ခြ...
“ မိဘတွေကို ကိုယ်စားခံစားကြည့်ပါ ”